चीन र नेपालबीचको ठूलो व्यापारिक तातोपानी नाकामा सल्बलाए तस्कर
Wed, Apr 8, 2020 at 6:03pm
गोदावरी नगरपालिका–१० का वडाअध्यक्ष हतियार र विभिन्न बैंकहरूका एटीयम सहित पक्राउ #आहा खबर# काेराेना कोषमा झण्डै २ खर्ब संकलन, कसरी हुन्छ रकमको सदुपयोग ? #आहा खबर# एयर अरेबियाको उडानबाट आएका तीनमा कोरोना देखिएन #आहा खबर# ३० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दै राष्ट्र बैंक #आहा खबर# के तपाईंको छटपटी बढेको छ ? यस्ताे गर्नुहाेस् #आहा खबर# कोरोना भाइरसकाे संक्रमणबाट १४ महिने शिशुको मृत्यु #आहा खबर# ट्विटरमा मालिकले गरे कोरोना राहत कोषमा एक अर्ब दिने घोषणा #आहा खबर# विवादै विवादमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले फेरि ३५ करोडको सामान किन्दै #आहा खबर# कोरोनाको उद्गमस्थल वुहान सहरमा हटाइयो लकडाउन #आहा खबर# जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ #आहा खबर# आगामी दुई साता हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री #आहा खबर# निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्ने तयारीमा राज्य #आहा खबर# जिल्लाजिल्लामा सामान पुर्याउदै सेनाको जहाज #आहा खबर# अवैध सम्बन्ध लुकाउन देवरको हत्या #आहा खबर# लकडाउनमा गाडी चलाउदा अभिनेत्रीकाे दुर्घटना, अवस्था गम्भीर #आहा खबर#
बुधबार, १८ भाद्र २०७६,	–देवराज सुवेदी.
मेलम्ची, १८ भदौ
चीन र नेपालबीचको ठूलो व्यापारिक तातोपानी नाकामा तस्कर सक्रिय हुन थालेका छन् । चार वर्षपछि खुलेको नाकामा सीमाक्षेत्रको बाटो भएर तस्कर सक्रिय हुन थालेको पाइएको छ । भूकम्पपछि बन्द भएका बेलामा चिनियाँ पक्षले नाकाको सुरक्षा संयन्त्र मजबुत नभएकै कारणले नाका खोल्न आनकानी गर्दै आएको थियो । अहिले नाका खुलेको दुई महीना बित्न नपाउँदै नाकाबाट अवैध सामग्रीको ओसारपसारको प्रयास भएको छ ।
केही दिनयता मात्रै नेपालको बाटो हुँदै तातोपानी नाकाबाट चीन लैजान लागिएको ८३ किलो रक्तचन्दनसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियोे । रक्तचन्दन र दुई भरियासहित काठमाडौँको बौद्धबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । केही साताअघि पनि तातोपानी नाका हुँदै राजधानी काठमाडौँ भित्र्याउन लागेको अवैध खाद्य सामग्री बरामद गरिएको थियो । लोड गरेर फिर्ता आउने क्रममा मितेरी पुलबाट अवैध मादक पदार्थसहित खाद्य सामग्रीको बोलेरो गाडी पक्राउ परेको थियो ।
पक्राउ परेको बोलेरो र चालक रु एक लाख ८६५ धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर, अवैध सामग्री पक्राउ परे पनि बाहिर कुनै सूचना आएको थिएन । पक्राउ परेका चालक रिहा भइसकेपछि मात्रै रहस्य बाहिर आएको थियो । सुरक्षाको दृष्टिले चुस्त पारेको हुनाले अहिलेसम्म कुनै अवैध गतिविधि नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेले दाबी गर्नुभयो । “खासाबाट लोड भएर आएका सबै सामान बन्दरगाहमा आएर जाँच हुन्छ, यताबाट उता प्रवेश नै कठिन छ”, प्रनाउ काफ्लेले भन्नुभयो, “त्यसैले अहिले कुनै अवैध सामग्री ओसारपसार हुनसकेको छैन ।”
अवैध व्यापार अवस्था यस्तो थियो
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका भूकम्पअघि अवैध व्यापारमा चर्चित थियो । सुन, रक्तचन्दनलगायतका अन्य बहुमूल्य सामग्री ओसारपसारको केन्द्र थियो । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्रिने सुन, रक्तचन्दन अरनिको राजमार्ग हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्न लाग्दा धेरैपटक प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
केही वर्षअघि रक्तचन्दनको अवैध ओसारपसार हुँदा प्रहरीले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, दोलालघाट, उग्रचण्डीनाला, धुलिखेललगायतका क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । यता सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न ठाउँबाट पनि रक्तचन्दन बरामद हुनुका साथै तस्करसमेत समातिएका थिए । तातोपानी नाका बन्द भएपछि तस्कर व्यापारिक केन्द्र परिर्वतन गरेको पाइन्छ । तातोपानी नाका बन्द भएपछि अवैध सुन रसुवाको केरुङ नाकाबाट समेत पक्राउ परेको थियो । तस्करले विभिन्न ठाउँबाट धेरै संयन्त्र अपनाएर तस्कारी गर्दै आएका थिए ।
तातोपानी नाकाबाट पहिलेको जस्तो अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि चिनियाँ पक्षले नेपाली टोलीसँगको वार्तामा पटक–पटक भन्दै आएको थियो । नेपाली सरकारी टोलीले सुरक्षा प्रत्याभूत गराएपछि मात्रै चिनियाँ टोली नाका सञ्चालनमा तत्पर भएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नाका सञ्चालनको एक साता अगाडि नाकाको सुरक्षा अवस्था चुस्त राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सवारीसाधन र रक्तचन्दन अलपत्र
तातोपानी नाकाबाट बरामद भएका रक्तचन्दन र सवारीसाधन अहिले अलपत्र अवस्थामा थन्किएर बसेके छन् । बरामद भएका रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने सवारीसाधन कवाड बनिसकेका छन् । अवैधरूपमा भित्र्याउने क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको करीब ४० हजार किलोभन्दा बढी रक्तचन्दन कुहिने अवस्थामा छ । चीनको खासा लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । बरामद भएका सामग्रीको विषयमा कानून नहुँदा के गर्ने भन्नेमा अन्योलता छाएकै कारणले अलपत्र परेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा विसं २०६२ देखि बरामद गरिएको रक्तचन्दन र कवाड बनिसकेका सवारी थन्किएर बसेका छन् । विसं २०६२ मा बाह्रबिसे प्रहरीले बरामद गरेको सात हजार ८०० किलो, २०६४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बरामद गरेको छ हजार ६०० किलो, २०६४ मै विशेष अनुगमन टोलीले बरामद गरेको आठ हजार २०० किलोलगायत रक्तचन्दन अपलपत्र अवस्थामा छ ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको आयआर्जनमा टेवा
नाका सञ्चालन भएपछि तातोपानी नाकाको व्यापारमा वृद्धि भएको छ । गत जेठ १५ गतेदेखि औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा आएको नाकामा अहिले विस्तारै व्यापारमा वृद्धि हुँदै आएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नाकामा व्यापार वृद्धि भएपछि राजश्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । नाका सञ्चालन भएपछि करीब डेढ महीनाको अन्तरालमा रु ५३ लाख मात्र राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यसअघि यस नाकाबाट दैनिक करौडौँ राजश्व सङ्कलन हुँदै आएको थियो ।
कोरोना भाइरसकाे संक्रमणबाट १४ महिने शिशुको मृत्यु
लकडाउनमा इँटा उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै झडप, प्रहरीसहित १३ जना घाइते
काेराेना संक्रमितसंगै यात्रा गरेका १०० सहयात्री सम्पर्क बिहिन
मोरङमा प्रहरी र शिकारीबीच दाेहाेराे भिडन्त
ट्याक्टर दुर्घटनामा परी सहचालककाे मृत्यु, चालक गम्भिर घाइते
भिडियो खिचेको भन्दै प्रहरीले कुटेपछि...
चट्याङका कारण धादिङ र रुकुमपश्चिममा दुईको मृत्यु
वीर अस्पताल भर्ना भएका युवककाे मृत्यु
कोरोनाकाे आशंका गरिएका दुई युवतीको अस्पतालमै मृत्यु
लकडाउनकै समयमा ८ वर्षीया बालिका बलात्कृत
कोरोना विशेष अस्पतालमा एक व्यक्तिको मृत्यु
सावधान: घरबाट बाहिर निस्किए जंगलमा ‘क्वारेन्टाइन’
सरकारकाे लापरवाही: कोरोना संक्रमितकै परिवारको नमुना परीक्षण भएन
रनवेबाट चिप्लियाे नेपाल एयरलाइन्सको विमान
अब पूरा सिलिण्डर ग्यास बेच्नेलाई कारवाही
शनिबार बिहानै लकडाउन उल्लंघन गर्ने १ सय ३९ जना पक्राउ
लकडाउनमा घरबाट बाहिर निस्किएको भन्दै दाइले गरे आफ्नै भाइको हत्या
झापाबाट कोरोना भाइसरको सङ्क्रमण देखियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने पक्राउ
पोखराको क्वारेन्टाइनमा एक नेपालीको मृत्यु
आइसोलेसनमा राखिएका युवकको मृत्यु
लकडाउनकाे अवज्ञा गरी जथाभावी सडकमा हिँड्ने १० जना पक्राउ
भारतबाट फर्किरहेका नेपालीहरुलाई प्ररीले रोक्न खाजेपछि धनगढीस्थित गाैरीफन्टा नाकामा झडप
साेमबारदेखि कैलालीमा अनिश्चितकालीन 'कर्फ्यु'
विप्लवका दाई चयन्द्र चन्दसहित ६ जना पक्राउ
काेराेनाकाे संक्रणबाट विश्वभर १४ हजार ६ सय ८७ जनाको मृत्यु, साढे ३ लाख संक्रमित
३ औषधि पसलमा तालाबन्दी, मिठाई पसलाट ३० ग्यास बरामद
गोदावरी नगरपालिका–१० का वडाअध्यक्ष हतियार र विभिन्न बैंकहरूका एटीयम सहित पक्राउ
काेराेना कोषमा झण्डै २ खर्ब संकलन, कसरी हुन्छ रकमको सदुपयोग ?
एयर अरेबियाको उडानबाट आएका तीनमा कोरोना देखिएन
३० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दै राष्ट्र बैंक
के तपाईंको छटपटी बढेको छ ? यस्ताे गर्नुहाेस्